Otu esi ewere Foto 3D kacha mma - LucidPix
Otu esi ewere foto 3D kacha mma
Otu esi ewere Foto 3D kacha mma na LucidPix
Na-ewere foto 3D bụ ihe na - akawanyewanye elu n'etiti ndị na - ese foto, azụmahịa na ọbụna ndị mmadụ kwa ụbọchị na - achọ iji nwalee foto ha. A na-adọta arịrịọ nke 3D Foto site n'ọchịchọ ịbụ ihe pụrụ iche. N'inwe ụdị onye ọ bụla nke ọma ụbọchị ndị a ịnweta igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka na igwefoto, ndị mmadụ chọrọ ụzọ iji mee ka foto ha pụọ ​​n'etiti igwe mmadụ ahụ. Nke a bụ ebe LucidPix batara. Ntuziaka dị n'okpuru na-enye ndụmọdụ gbasara otu ị ga-esi nweta ya kasị mma Foto 3D eji LucidPix.
Atụmatụ na usoro maka inweta foto 3D kacha mma
Mechie echere: Ọ bụrụ na ị bụ nna ukwu Photoshop, enwere ike ị ga - ama na otu ụzọ iji mepụta foto 3D bụ Photoshop ha na kọmpụta desktọpụ gị. Agbanyeghị, nke a bụ n'ezie ihe siri ike karịa ka ọ dị. Ọ nwere ike iweghara nnukwu oge izuru ụbọchị gị iji kee ezigbo map nke na-emetụta eziokwu. Kama, LucidPix na-enye usoro ngwa ngwa ọzọ dị mfe iji nyere aka chekwaa oge gị. AI dị elu nke zoro n’etiti LucidPix na-enye gị ohere iwepụta foto 3D dị mma na ole na ole nke ihuenyo iPhone gị ma ọ bụ gam akporo gam akporo.
Nwee ihe nile omimi: Ka omimi ihe omuma gi di na foto a, o ga-aka nma nsonaazụ 3D a. Dịka ọmụmaatụ, iji eserese ala dị larịị nwere ike igbochi okike oke na foto ahụ. Lee n'okpuru maka ọmụmaatụ otu anyị siri mee ya!
Gbaa mbọ hụ na ihe ahụ dị: Ọ bụrụ na ị na-ejide mmadụ ma ọ bụ anụmanụ, jide n'aka na ha ka nọ n'otu ọnọdụ ahụ niile na - ese foto (a ga - echetara gị nke a na LucidPix App!)
Mezie ihe ahụ n'etiti etiti ihuenyo ahụ: Maka nsonaazụ kachasị mma, gbalịa itinye isiokwu ahụ n'etiti ihuenyo ahụ iji lekwasị anya na ya wee hụ na isi isiokwu anaghị ahapu eserese ahụ!
Were isiokwu dị iche iche gwuo egwu: Chọ ịmata ihe bụ ihe na-akpali ọmarịcha foto 3D, yabụ nwalee ihe dị iche iche, nso, ndabere na ihe ndị ọzọ iji nyochaa nsonaazụ gị ma hụ ihe kacha mma! Ọ bụrụ n’ị na-achọ mmụọ ụfọdụ, lee anya Pexels na Unsplash iji hụ ụdị foto na-apụ apụ!
Soro ndi obodo: Oge ikpeazụ a gụnyere itinye aka na ntanetị otu foto na ibe peeji 3D iji wee bụrụ akụkụ nke obodo niile. Ga-enwe ike ịse foto gị, nyocha peeji, jikọọ ndị nwere uche, mụta ihe site na ndị ọzọ, na nke kachasị mkpa, nwee mmụọ nsọ! Ọ bụrụ na ị na-achọ peeji Facebook iji soro, lelee Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix na LucidPix 3D foto na Facebook!
Etu ị ga-esi were foto nri 3D dị ịtụnanya na LucidPix →← Ngwa Top 3D foto maka Instagram